काठमाडाैं महानगर अपडेट : काेर एरियाकाे मतगणना जारी कसकाे कति मत ?
May 20, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडाैं महानगर अपडेट : काेर एरियाकाे मतगणना जारी कसकाे कति मत ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा मतगणना जारी रहेको छ । निर्वाचन अधिकृतकाे कार्यालयले सार्वजनिक गरेकाे पछिल्लो परिणामअनुसार मेयरका उम्मेदवार बालेन साहले ३० हजार मत कटाएका छन् । ८१ हजार ७६५ मतगणना हुँदा साहले ३०८५८ मत पाएका छन् । यस्तै एमालेका केशव स्थापितले १६३३७ र सिर्जना सिंहले १५९६० मत पाएका छन् । अहिले वडा नम्बर १ देखि छ […]
भरतपुर महानगरमा ६३ हजार मतगणना, कसले कति मत पाए ?
May 20, 2022 May 20, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुर महानगरमा ६३ हजार मतगणना, कसले कति मत पाए ?
भरतपुर । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा अहिलेसम्म ६३ हजार मतगणना भएको छ । प्रमुखमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की रेनु दाहालले २४ हजार १०७ मत ल्याएर अग्रता कायम गरेकी छन् । उनलाई पछ्याइरहेका नेकपा (एमाले)का विजय सुवेदीले २० हजार ३५० मत ल्याएका छन् । रेनु विजयभन्दा ३ हजार ७५७ मत अघि छन् । यस्तै स्वतन्त्र उमेदवार जगन्नाथ पौडेलले ८ हजार […]
काठमाडौं महानगरको उपमेयरमा एमालेकी सुनिताले पाइन् सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारभन्दा तेब्बर बढी मत
May 20, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडौं महानगरको उपमेयरमा एमालेकी सुनिताले पाइन् सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारभन्दा तेब्बर बढी मत
काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाको उपमेयर पदको लागि नेकपा एमालेकी सुनिता डंगोलले २७ हजार बढी मत पाएकी छन्। उनले आफ्नो अग्रता कायम राख्दै आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूसँग फराकिलो मतान्तर बनाएकी हुन्। राष्ट्रिय सभा गृहमा जारी मतगणनामा शुक्रबार साँझसम्म उनले २७ हजार ७०२ मत प्राप्त गरेकी हुन्। अहिलेसम्म ७४ हजार ७५१ मत गणना भएको छ। यता उनका प्रतिस्पर्धी सत्ता […]
भरतपुरमा ६० हजार मत गणना हुँदा कसकाे कति मत
May 20, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुरमा ६० हजार मत गणना हुँदा कसकाे कति मत
भरतपुर । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको ५९ हजार ७२५ मत गणना हुँदा मेयर पदमा गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी रेनु दाहालले तीन हजार २०५ मतले अग्रता लिएकी छन् । महानगरको वडा नम्बर १ देखि १२ सम्मको गणना सम्पन्न हुँदा दाहालले २२ हजार ५९८ मत प्राप्त गर्दा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार विजय सुवेदीले १९ हजार ३९३ मत प्राप्त गरेका छन् […]
कलैया उपमहानगरमा सत्ता गठबन्धनले हार्‍यो, एमालेकाे शानदार जीत
May 20, 2022 N88LeaveaComment on कलैया उपमहानगरमा सत्ता गठबन्धनले हार्‍यो, एमालेकाे शानदार जीत
बारा । बाराको कलैया उपमहानगरपालिकामा एमाले विजयी भएको छ। सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हराउँदै मेयर र उपमेयरमा एमाले उम्मेदवार विजयी भएका हुन्।मेयरमा एमालेका विनोद साहले २२ हजार ९६ मत ल्याएर जित हात पारे। उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका राजेश राय यादवले १६ हजार ८७६ मत पाएका छन्। उपमेयरमा एमालेकी रौशन परविन विजयी भएकी छन्। परविनले १७ हजार […]
भरतपुर अपडेट : ५९,६१६ मत गणना हुँदा कसले कति पाए ?
May 20, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुर अपडेट : ५९,६१६ मत गणना हुँदा कसले कति पाए ?
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)की मेयर उमेदवार रेनु दाहालले अग्रता कायमै राखेकी छन् । कुल ५९ हजार ६१६ मत गणना हुँदा रेनुले २२ हजार ५६९ मत पाएकी छन् । उनलाई एमालेका विजय सुवेदीले १९ हजार ३४७ मतसहित पछ्याइरहेका छन् । विजयभन्दा रेनु ३ हजार ३२२ मतले अगाडि छिन् । त्यसैगरी स्वतन्त्र उमेदवार […]
मत गणना नसकिँदै एमाले उम्मेदवारले हार स्वीकारे, दिए गठबन्धनकी उम्मेदवारलाई बधाई !
May 20, 2022 N88LeaveaComment on मत गणना नसकिँदै एमाले उम्मेदवारले हार स्वीकारे, दिए गठबन्धनकी उम्मेदवारलाई बधाई !
मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार मीना लामालाई मतगणना नसकिंदै प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले बधाई दिएका छन्। हेटौंडामा करीब दुई हजार मत गन्न बाँकी छ। मेयरमा गठबन्धनबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की उम्मेदवार लामा दुई हजार मतले अगाडि छन्। मतगणना चलिरहेको वेला नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार अनन्त पौडेलले लामालाई बधाई दिएका हुन्। प्राविधिक रूपमा घोषणा हुन बाँकी भए पनि लामाले […]
आफ्नै पत्नीलाई चुनाव जिताउन सकेनन् मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री
May 20, 2022 N88LeaveaComment on आफ्नै पत्नीलाई चुनाव जिताउन सकेनन् मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री
वीरगञ्ज। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नै पत्नीलाई चुनाव जिताउन सकेनन्। जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० बाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित बिस्मिल्लाह खातुनको टिकट काटेर राउतले अन्तिम समयमा आफ्नो श्रीमती जलेखा खातुनलाई पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदको उम्मेदवार बनाएका थिए। यो घटनाबाट दुस्खी बिस्मिल्लाह पार्टी छाडेर माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकी थिइन। मुख्यमन्त्री राउत पत्नीलाई नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार बबिता […]
काठमाडौँ महानगरको ७८ हजार ३६० मत गन्दा कसको कति ?
May 20, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडौँ महानगरको ७८ हजार ३६० मत गन्दा कसको कति ?
काठमाडौँ ।काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले २९ हजार ५ सय ८२ मत प्राप्त गरेका छन् । ७८ हजार ३६० मत गन्दा साहले सो संख्यामा मत पाएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका केशव स्थापितले १५ हजार ९२१ मत पाएका छन् । स्थापितसँग बालेनको अग्रता १३ हजार ६६१ मतको छ । सत्ता […]
किरण सहित १० खेलाडी बाहिर राख्दै राष्ट्रिय टोली घोषणा, काे काे छन् ?
May 20, 2022 N88LeaveaComment on किरण सहित १० खेलाडी बाहिर राख्दै राष्ट्रिय टोली घोषणा, काे काे छन् ?
काठमाडौँ। नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले एएफसी एसिया कप २०२३ को तेस्रो चरणका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार प्रशिक्षक अल्मुताइरीले नियमित कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जोङसहित विद्रोह गरेका १० खेलाडीबिनै २३ सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन्। एएफसी एसियन कप छनोटको तयारीमा रहेका नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मिडफिल्डर रोहित चन्दलाई प्रशिक्षक अल्मुताइरीले पटक […]